Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguMireille
Rente umhlaba wethu ngaselwandle kwisahlulo esincinci. Ilungele iiholide kunye nosapho okanye abahlobo.
Ecaleni lolwandle, i-bungalow eqhelekileyo enekhitshi enezixhobo kunye nendawo yokuhlala emva koko yabekwa kwakhona emhlabeni 3 i-bungalows exhotyiswe ngokupheleleyo kunye neshawari ye-WC yokupholisa umoya. Onawo 1 BBQ 3 Kayaks kunye nommandla waselwandle kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwipropati. Chitha impelaveki uphumle iinyawo zakho emanzini ngaphantsi kweyure ukusuka eNoumea kwindawo encinci yezindlu.
Kwindawo ekhuselekileyo yeehektare ezingama-40, fumana umoya we-Balinese emoyeni wolwandle, enkosi kwii-bungalows ezi-3 ezisasazwe kwindawo enemithi.
Kwiplancha yakho ye-BBQ, i-kayak e-3 yephenyane kubandakanya i-1 kabini yokuhamba echibini. Elunxwemeni, i-bungalow ekwabelwana ngayo ukulungiselela ukutya okulungileyo kwi-oveni enomthamo omkhulu, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya zikwakhona. Ikona yokujingi yabantwana.
Ii-bungalows zijikelezwe zizityalo ezithetha ukuba ziyindawo yokusabela yezinambuzane ezincinci: nokuba sizibeka ngokucokisekileyo kunye nokucocwa rhoqo, asinakuqinisekisa ukuba awuyi kujongana nobuso nesigcawu okanye i-margouillat.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Isabelo senziwe ngamaqashiso asi-8. Sininzi n ° 1 kwaye sixhamla kwisakhiwo esikhulu ngokwaneleyo sokuhlala usapho olukhulu okanye abahlobo abanqwenela ukonwabela ulwandle ngelixa besonwabela ibungalows zethu.
Ifumaneka ngefowuni ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.